Tonga amin'ny Google Top miaraka amin'ny Semalt
Ny habaka an-tserasera dia mamaritra ny lalànany manokana. Ny fanaovana raharaham-barotra amin'ny Internet dia tsy toy ny manao asa aman-draharaha ao amin'ny tontolo tena izy. Izy io dia sady mora kokoa sy sarotra kokoa. Raha tsy fantatrao ny lalàn'izao tontolo izao dia handeha ny varavarankely. Raha mampiasa optimization SEO ianao dia miasa toy ny famantaranandro ny orinasanao. Raha tompon'ny orinasa ianao, mpandinika orinasa, na manam-pahaizana manokana momba ny marketing, dia mety ho liana amin'ny mianatra momba ny fomba vaovao ianao amin'ny fampiasana mahomby ny fampiasa amin'ny tranonkala. Izay karazana fitadiavana vola, raha toa ka ara-dalàna dia azo nohamafisina sy hatsaraina ary hivoatra raha fantatrao ny fitsipiky ny habaka virtoaly.
Azoko atao ny mampiroborobo ny orinasan-tserasera?
Efa naheno tantara momba ny olona izay nanomboka ny orinasan'izy ireo tamin'ny Internet hatramin'ny voalohany ianao. Angamba ireo lehilahy faly ireo dia nahitana tsy nahitana lalàna momba ny fampiroboroboana tao amin'ny World Wide Web. Moa ve ianao mahay mandinika sy manan-tsaina hitombo mahaleo tena amin'ny fampakarana ny fifamoivoizana amin'ny e-varotra? Inona no tokony ho fantatry ny mpandraharaha vaovao? Aiza no hahitana fitaomam-panahy amin'ny fahaterahan'ny tetikasa tsy mahazatra? Raha mitady fanazavana, mandeha any amin'ny Internet isan-karazany ny loharano. Misy karazana fampahalalana isan-karazany hitranga aminao. Hanjary hilentika any amin'ny intricacy sy nuances ianao, ary alohan'ny hahitanao traikefa iray, dia diso fanantenana zato ianao amin'ny habaka virtoaly sy ny mety ho fetrany tsy misy fetra.
Tsara, azo atao koa io fomba io. Afaka mahazo diplaoma amin'ny làlan'olon-tokana ianao, mandoa vola tsara. Inona no azonao amin'ny vokatr'izany? Fotom-pahalalana matanjaka izay mila ampiharina amin'ny toe-javatra tsy manara-penitra izay tsy voalaza ao amin'ny boky boky rehetra. Ary mbola miverina amin'ny mpampianatra anao ihany koa, izay hanome valiny hafahafa. Nahoana? Mety ho lavitra ny toe-javatra iainana izy io. Inona no ho azonao? Ho very andro sy volana be ianao. Izao no fotoana tsy ampoizinao misintona. Nahoana? Hipetraka ny toerana misy anao ary mila mitady hevitra vaovao sy fotoana vaovao ianao. Vonona ho amin'izany fanantenana izany ve ianao?
Fitaovana tamba-jotra hahomby
Ny mpanjifa dia mijery ny fivarotana an-tserasera ho an'ny karazana fivarotana ananan'izy ireo amin'ny tontolo tena izy. Izy ireo dia mitaky fomba fiasa sy fanohanana ara-tsaina. Saingy tsy afaka manompo ny mpitsidika rehetra eny amin'ny fivarotanao virtoaly fotsiny ianao, indrindra raha tonga amin'ny fotoana mitovy ihany. Raha tsy mahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa anao amin'ny fomba voajanahary ianao dia tsy raharahiany ny fiheveran'ny varotra. Izany no antony ilan'ny mpandraharaha an-tserasera mila olona za-draharaha izay hitantana ny fomban'ny olombelona, ary koa ny fitaovana fanaraha-maso mahomby.
Na inona na inona ny torolàlana momba ny orinasanao dia mila fitaovana SEO mahomby sy manampahaizana manokana ianao izay hanampy amin'ny fampandehanana ny orinasanao. Ny fivarotana na dia ny entana mahazatra amin'ny Internet aza tsy mora tahaka ny toa azy amin'ny voalohany. Izany hoe raha hivarotra baety iray na programa iray ianao dia ho ataonao na ho ela na ho haingana. Fa isika izao dia miresaka momba ny varotra tsy mitsaha-mitombo sy mitombo, izay hahazoanao tombony mifaninana sy fanohanan'ny mpanjifa tonga lafatra.
Miaraka amin'ny fidirana fampahalalana mangarahara sy eo no ho eo, ny rindrambaiko kilasy voalohany dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny fandraharahana. Tsy mitsaha-mitombo ny fahombiazana amin'ny orinasa antonony, ary ny fanombohana dia mihena amin'ny tombony mahafinaritra. Ny mpanjifa mety dia mandehandeha kely mandritra ny fotoana maharitra. Tsy maintsy miomana ho an'ireo olona liana an'arivony mandalo ianao. Afaka misy mametaka ny mpanjifa mahaliana azy amin'ny fiainany andavan'andro sy ny olany. Ny fahatsapana ny fifandraisana marika dia mitaky politikam-barotra manokana sy ny fampidiranao hatrany. Ny mpanjifa mety dia tsy maintsy mikolokolo tsara, mamboly ny fahatokisany amin'ny marika.
Hihaona amin'ny serivisy tranonkala Semalt
Ny fitaovana an-tserasera etsy ambony dia hahasarika ny mpanjifa vaovao ary hampiakatra lehibe ny vola miditra. Ny isany dia lehibe kokoa, saingy izy ireo dia tsy mihoatra ny sisin'ny faritra izay notompoina. Ny masoivoho nomerika dia manolotra ny mpanjifany tsy vitan'ny fitaovam-barotra mahomby fa ihany koa tetikady iray ahafahanao manatsara ny mety ho fitaovan'ny fikarohana. Raha te hiala amin'ny faritra misy anao, fanjakana, firenena, na kaontinanta aza ianao dia manana fitaovana azo itokisana. Ampiasao izany mba ho lasa malaza maneran-tany.
Semalt no hitarika anao amin'ny lalan'ny tsiambaratelo fikarohana, misafidy teny fanalahidy izay mifandraika amin'ny hetsika ara-barotra. Saika eo noho eo dia ho voarainao daholo ny angon-drakitra takiana momba ny indostria amin'ny fitambarany, ny fahombiazan'ny fifaninanana ary ny laza. Ho afaka hijery ny fivoaran'ny tambajotra sosialy ianao, hampitombo ny fahatongavanao isa-minitra.
Tsy ho very ny fifandraisany amin'ny SEO ny taonjato faharoa-polo. Ny momba ny fifamoivoizana organik no ho azon'ny marika amin'ny alàlan'ny milina fikarohana. Hanampy anao haka toerana maharitra ianao. Ny fampiasam-bola kely sy fiaraha-miasa tsy tapaka miaraka amin'ireo manampahaizana dia hanome valiny manaitra. Ny hadisoana momba ny raharaham-barotra dia azo esorina amin'ny laoniny. Ny tsy fahombiazan'ny sasany dia azo atao, fa ny tetika efa voalamina tsara dia afaka manohitra ny tsindry amin'ny tsena. Fidio ny paikady mifanentana amin'ny tsenanao dia alao ho azy.
Ny fahitana ny Semalt dia nofaritan'ny fampiroboroboana ny Internet. Ny talenta marevaka dia tsy dia mahazatra, fa raha iray amin'ny ekipa iray dia misy fahagagana mitranga. Nitranga ny fahagagana tamin'ny 2013 rehefa maro ireo manan-tsaina tena nanapa-kevitra ny hiditra ho hery ary hamorona Semalt. Ny orinasa dia manana ireo mpiasany manerana an'izao tontolo izao. Ankehitriny, tsy mila mandeha any an-toeran-kafa ireo bandy tanora sy mampanantena. Ny tsirairay amin'izy ireo dia manana ny fanabeazana fototra sy fahaiza-manao fototra amin'ny tetik'asa IT.
Mba hagnaronana ny orinasanao dia tsy mila mijoro an-tsofina ianao. Tsy ilaina ny manamboatra ny kodiarana amin'ny fametrahana fitsaboana. Raha te hiditra amin'ny Google Top Results dia mila mifandray amin'ireo manampahaizana Semalt ianao. Manana pilina izahay izay hanampy amin'ny fitomboanao. Miasa ny fikarakarantsika, na inona na inona maha-firenena, fanjakana, na kontinanta. Tianao ny antsoin'ny findainao hatrany amin'ny mpanjifanao? Tianao ho feno isan'andro amin'ny mailaka tsy mbola novakiana ny mailanao? Te hampiakatra ny laharan'ny orinasa amin'ny marika avo indrindra ve ianao? Te hampitombo ny vola miditra amin'ny roa, telo ve, sy ny sisa ianao? Tsotra be ny zava-drehetra. Raha vonona ny hampivoatra ny orinasanao ianao, tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity.
Ny tranga mahazo anay
Ny fitaovana SEO SEO dia ampiasain'ny mpanjifa avy amin'ny firenena am-polony manerana izao tontolo izao. Miteny anglisy ve ianao? Ny mpiasa ao no hiteny ny fitenin-drazanao. Ao amin'ny tranokalan'ny orinasa dia ahafahanao mahafantatra azy tsirairay avy. Misy ny fijerena ireo mpanjifa mankasitraka. Tsy noforonina tantara tsy misy fototra amin'ny tontolo ara-nofo ireny. Ianao koa dia afaka mitsidika ny tranokala orinasan'ny orinasa nahomby izay nanampy an'i Semalt mba hambinina:
SERVICE ROYAL (Apple Service Center). Nanararaotra ny Semalt FullSEO ity orinasa Okrainiana ity ary nampitombo ny fifamoivoizana voajanahary inefatra ao anatin'ny 10 volana!
Zaodrasle.si. Ny fivarotana fivarotan-tserasera sosiana dia nanolotra vokatra sy serivisy nandritra ny enin-taona. Nandritra ny folo volana niaraha-miasa niasa tamin'i Semalt, ity tranonkala ity dia nitombo ny fifamoivoizana fikarohana ara-boajanahary tamin'ny 520%, ary koa nampitombo ny isan'ireo fitsidihana isam-bolana isaky ny 1216. Androany, Zaodrasle.si dia orinasa lehibe indrindra ao Slovenia ao amin'ny sahan'izy ireo.
Vavahady ho an'ny fikarohana sy hividianana francais. Nilaza i SEO Will Frankling fa ny fonosana FullSEO dia nanampy ny orinasany hampitombo isa ny teny fanalahidy ao amin'ny Google TOP-10 ka hatramin'ny 5782, ary ny fifamoivoizana organika 303% mandritra ny 9 volana voalohany. Ankehitriny, ity orinasam-pifandraisana ity dia iray amin'ny toerana voalohany amin'ny indostrian'ny franchise any Royaume-Uni.
Inona no atolotrao?
Izay mpampiasa Internet dia mahalala hoe inona ny motera fikarohana. Azo antoka fa nampiasa ny iray tamin'izy ireo ianao. Ankehitriny dia misy maro amin'izy ireo, saingy Google no be mpitia indrindra. Ahoana ny fomba fiasan'ny milina fikarohana? Miditra fangatahana ianao ary mahazo lisitry ny tranonkala hitan'i Google, Rambler, na Yandex. Mariho fa ny tranokala sasany dia latsaka eo amin'ny toerana voalohany, fa ny sasany kosa mijanona lavitra. Raha ny antontan'isa, ny anjaran'ny liona dia tsy manokatra ireo rohy izay eo amin'ny toerana voalohany ihany. Mba hidirana amin'ny TOP-10 dia mila manao fepetra maromaro ianao hampiakarana ny toeran'ny tranokala ao amin'ny Google-index ho an'ny fanontaniana napetraka talohan'ny asa.
Fampiasana fitaovana SEO
Fantatry ny injeniera Semalt ny fomba hametrahana ilay toerana eo amin'ny toerana voalohany ao amin'ny Google TOP 10. Hampitombo ny fifamoivoizana sy ny varotra an-tserasera isika. Ny fampiroboroboana Internet dia mety mahomby ho an'ny orinasa REHETRA izay ny mpihaino mety mitady vokatra na serivisy mitovy amin'ny Internet. Araka ny antontan'isa, mitombo isan-taona ny isan'ny mpampiasa Internet. Ankehitriny, mihoatra ny ampahatelon'ny mponina eto amin'izao tontolo izao no mampiasa ny Internet. Nahoana no mahasarika ny orinasanao ity mpihaino ity? Afaka mandoa vola izany. An'arivony sy mpampiasa an'arivony hikaroka isan'andro ny entanao fa mahita ny entan'ny mpifaninana. Izany dia satria ny mpifaninana mahomby kokoa dia efa nandray ny toerana tsara indrindra ao amin'ny valin'ny fikarohana fikarohana. Azonao atao ny mandeha ao amin'ny masoandro eto amin'ireo toerana ireo. Mba hanaovana izany, mila manomboka manomboka ny optimization tranokala tranokala ianao.
Amin'ny endrika fohy sy azo idirana dia hanazava amin'ny mpitsidika izay ataonao izahay. Horonantsary fampiroboroboana ny orinasanao dia hanintona ny mpanjifa vaovao ary hampitombo ny fiovam-po.
Fakafakao tranokala misy varotra
Amin'ny zava-misy maoderina, ny fampahalalana dia ny ran'ny orinasa. Ny tsy fahampian'io dia mitarika amin'ny anemia. Mba ho ao anatin'ny fahalalana sy hifehezana ny orinasanao, ampiasao ny angon-drakitra famotopotorana tanjona ary vinavina ny fivoaranao. Mifehy ny orinasanao amin'ny Internet miaraka amin'ny manam-pahaizana momba ny Semalt!
Mpanjifa maherin'ny telo arivo tapitrisa aza tsy mampaninona ny mividy ny vokatrao. Maninona no tsy vitan'izy ireo izany? Ny mpifaninana an-tapitrisany maro no tsy mamela anao hiditra ao amin'ny Google Top. Atsangano ny haavon'ny asa! Mahita fomba vaovao amin'ny marketing ary handresy ny fifaninanana! Ahoana no fanaovana an'izany? Misafidiana ny matihanina tena manana traikefa be. Manjary mpanjifa Semalt ankehitriny! Amin'ny maha client anao, dia hahazo serivisy serivisy feno ianao, izay misy ny fampandrosoana, ny famerenany manokana ary ny fampiroboroboana ny fivarotana an-tserasera, ary koa ny fanohanana ara-teknika matihanina. Amin'ny fisafidianana an'i Semalt, azonao atao ny mandeha mora foana amin'ny orinasanao amin'ny Internet ary ho lasa NUMBER ONE.
Ny matihanina za-draharaha dia maniry hiara-hiasa aminao amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany, mandritra ny taona, amin'ny fotoana rehetra. Ireo olona ireo dia ho afaka mahatakatra ny mombamomba ny karazana e-commerce.
Ny portfolio Semalt dia ahitana tranga mihoatra ny 800,000 vita tamin'ny mpanjifa mihoatra ny 300.000. Ny tetik'asa rehetra dia azo alaina ao amin'ny loharanon-tranonay.
Fampiasam-bola kely indrindra amin'ny fampivoarana ny tetikareo ary tena vokatra tsara.
Talanjona hatrany ny mpanjifanay amin'ny vidiny mora sy manome tolotra mahasoa.
Inona no atao hoe Search Engine Optimization?
Ho eo ambany fifehezan'ny manager manokana sy ny ekipanay SEO ny orinasa. Izahay dia hijery ny tranokalanao amin'ny sivana Google ary hamolavola paikady manaraka. Ankoatry ny zavatra hafa, ny manampahaizana Semalt dia hisafidy ireo teny fanalahidy malaza indrindra izay hahasarika olona mety ho tonga mpihaino. Izahay dia hamakafaka ny firafitry ny tranokala sy ny fitsinjarana ireo teny fanalahidy, ary koa pejy misafidy ho an'ny fampiroboroboana ireo andian-teny mifandraika amin'izany. Ilaina ny manangona vaovao momba ireo mpifaninana aminao mba hihaona amin'izy ireo amin'ny fitaovam-piadiana tanteraka.
Ahoana no fomba hitrandrahana loharano an-tserasera?
Mba hanararaotra ny fivarotana an-tserasera ananan'ireo mpifaninana, dia mila esorina ny fameperana izay manakana ny fampiroboroboana. Manome dingana andian-dingana izay hametraka anao eo amin'ny toerana voalohany izahay:
hamorona meta tag mifanaraka amin'ny teny fanalahidy;
hanatsarana ny kaody HTML;
handrafitra ireo marika sy toetoetra izay hifanenan'ny milina fikarohana ankehitriny.
Ny fanamafisana dia midika koa ny fanakatonana rohy tapaka sy famoronana rohy ambony indrindra amin'ny rohy fampiakarana. Ny fanovana ireo robots.txt sy ny rakitra .htaccess dia hanatsara bebe kokoa ny fahitana ny tranokalanao eo amin'ny toerana misy ny lozisialy fikarohana.
Teny sy teny be loatra be loatra, sa tsy izany? Miaro anao amin'ny fisafotofotoana sy aretin'andoha, tsy voatanisa eto ny fepetra rehetra "fepetra fitsaboana". Hitanao izao fa sarotra ny manao laharana voalohany amin'ny varotra sy ny malaza amin'ny World Wide Web. Ny fampiroboroboana SEO dia tena mila fahalalana manokana ary mifototra amin'ny traikefan'ny tetikasa teo aloha. Ekipa tanora matihanina, mirisika ary mahomby dia vonona hanampy anao. Miaraka isika dia hanangana fampielezankevitra mahomby amin'ny SEO ary hahatonga ny orinasanao ho hita maso ny mpitsidika sy ny mpividy. Azo atao ny fahombiazana. Matihanina fatra-pialana. Ny ekipa Semalt dia ho lasa motera mahery anao amin'ny làlana mankany amin'ny laza sy ny fanambinana raha maniry.
Afaka mipetraka any amin'ny toerana rehetra eto ambonin'ny tany ianao ary miteny fiteny rehetra. Azonao atao ny manamboatra fitaovana Apple ao Minsk na mivarotra trano any Etazonia. Azo antoka fa hahita vahaolana ho an'ny orinasanao ianao ary hampiroborobo ny tranokalanao. Fantatsika ny fomba fiasa izany satria pros isika. Aza hadino ny orinasanao manokana ary avelao hampiroborobo azy ireo. Miaraka isika hahatratra bebe kokoa!